Ukonakala & I-Wire-O Bound Book-Book Printing China
Ulapha : Umphandle>zonke Products>Ukonakala & Wire-O Bound Book
Ukonakala kunye ne-Wire-O Book Bound
Uzahlula njani ukubopha komoya kunye ne-wire-o yokubopha? Ukubopha okujikelezayo yimingxunya ejikelezileyo, Ngelixa ucingo-o olubophayo yimingxunya yesikwere. Ngokwesiqhelo ucingo-o lubophelelayo lusebenzisa imigca emibini, imigca yesinyithi kakhulu. Xa abantu bekhetha umgca omnye emva koko siya kukwenza ukubopha okujikelezayo.
Ngubani othanda ukukhetha ukujikeleza kunye ne-wire-o yokubopha? Xa abantu befuna ukwenza ikhathalogu / isicwangciso / incwadi yokubhalela / ikhalenda / iincwadana / incwadi yesitikha njl. bangathanda ukukhetha olu khetho lubophelelayo, kuba oku kubopha iincwadi kunokuvulwa ngokuthe tyaba, Kulula ukufunda nokubhala.
Ukubopha okujikelezayo kunye ne-wire-o yokubopha kukho imilinganiselo yokubamba esemgangathweni yokubopha. Iimpawu zolu bophelelo zomelele kwaye zomelele, ingayi 180 izidanga okanye 360 iidigri zijikile. Ukuhlangabezana neemfuno zabantu abaninzi, ungakhetha uqweqwe oluthambileyo okanye oluqinileyo njengoko uthanda.
Ucingo olufihliweyo O Ukudibanisa ukuprintwa kwabantwana kwiNcwadi
Amanqaku amnandi aBantwana aNemibala aMnandi Isandi se-Wire-O Book
Umgangatho oPhakamileyo weRose yeFoyile yeGolide eHhafu eFihliweyo yeOff Notebook
I-China ikwenzela uMgangatho oPhezulu ngeXabiso eliXabiso ngeXabiso lokuPrinta iNcwadi
Ukuprintwa kweNcwadi eQinisekisiweyo kuMbala oPheleleyo, I-Wire O Iincwadi zokubopha
Ixabiso eliphantsi lokushicilela iNcwadi yamanqaku & I-Wire-O Incwadi Ebophayo
Spiral ngentando& Ukuprintwa kwencwadi yokupheka kwincwadi yokupheka eTshayina
Umoya odumileyo &I-Wire-O Bound Book Printing Planner Printa
Incwadi ePhakamileyo yoMgangatho nge-Wire-O Binding